Ongororo Yangu: Google Analytics ye iPhone | Martech Zone
Chitatu, July 10, 2013 Douglas Karr
KISSmetrics vaburitsa itsva iPhone YEMAHARA application inonzi MaAnalytics angu. Iyo ndiyo inokurumidza nzira yekuona kuti ako Google Analytics metric ari kuita sei iwe uri kure nedhesiki rako.
Pakutanga gore rino, vanhu veKISSmetrics vaitsvaga yakanaka Google Analytics app kuti ivabatsire kuchengeta tabo pane yavo yega data. Uye havana kuwana imwe. Pamwe iwo maapplication emafoni aive WAY akakosha uye aisakubvumidza iwe kuti uenzanise, kana ivo vakaedza kuita WAY zvakawandisa uye zvaisave nyore kushandisa.
MaAnalytics angu inoratidza yako Google Analytics data kana iwe uri kuenda, mumusangano, kana uchida kukurumidza kugadzirisa.
ne MaAnalytics angu, iwe unogona kuenzanisa data yanhasi nezuro, zuva rimwe chete vhiki rapfuura, uye nezuva rimwe chete mavhiki maviri apfuura Iwe unogona zvakare kuenzanisa data rezuro nemavhiki apfuura kana data revhiki rino kumasvondo apfuura.
MaAnalytics angu inokupa iyo data yaunoda ipapo ipapo. Iwe unowana nekukurumidza kuwana kune ako Anoshanya, Akasarudzika Vashanyi, Peji maonero, Zvinangwa, Ecommerce Transaction uye Ecommerce Revenue.
Tags: Ecommerce RevenueEcommerce Transactionzvinangwagoogle analyticsgoogle analytics nharembozhaiosiPhonepeji maoneroVakasarudzika VashanyiVisits
Sep 20, 2013 pa 3: 08 AM
Wow, ndinofunga iyi yakanaka app kune avo vanoda kukurumidza kugadzirisa.